Izindaba - Ubuciko kanye nenqubo yokwenza amabheji
Umhleli we-Kingtai uthole ukuthi kusenabantu abaningi abangakacaci kahle ngezinyathelo zokwenza ibheji ngokwezifiso. Namuhla ngizokwabelana nawe ngesihloko mayelana nokwenza ibheji ngokwezifiso.
Lesi isihloko sesinyathelo ngesinyathelo, ngethemba lokusiza abangani abanemibuzo.
Izinyathelo zokukhiqiza ibheji ikakhulukazi zihlanganisa izici ezilandelayo:
1. Ikhasimende lihlinzeka ngefayela langempela lokusalungiswa komklamo, futhi ifekthri yenza umdwebo womthelela ngokusekelwe kumdwebo, futhi umphumela womdwebo uzoqinisekiswa kukhasimende ngemva kokuthi umdwebo womphumela uphumile. Uma ingekho inkinga, izovulwa.
Qala ukwenza isikhunta.
2. Ngenisa ifayela lomdwebo wokuklama eliqinisekiswe ikhasimende kuhlelo lomshini wokuqopha we-CNC wokuqoshwa kwesikhunta. Isikhunta esiqoshiwe sidinga ukuphathwa ngokushisa.
Ngemuva kokwelashwa okushisa, isikhunta sizoba lukhuni futhi siqine.
3. Ngemva kokuba isikhunta sesiqediwe, sifake emshinini wokubhoboza, bese usebenzisa umshini wokubhoboza ukuze ugcizelele iphethini esikhunjeni ezintweni zensimbi.
4. Insimbi enephethini ephrintiwe idinga ukushaywa, futhi umkhiqizo ugxivizwe ngokuvumelana nokuma kwephethini.
5. Imikhiqizo enezitembu izoba nama-metal burrs, aklwebhekile, futhi adinga ukupholishwa futhi ukuze acwebezelise ubuso bomkhiqizo.
6. I-Electroplating, i-electroplating yenziwa ngokuvumelana nezidingo zekhasimende. Ngokuvamile, kukhona igolide lokulingisa elengeziwe kanye ne-nickel plating.
7. Ngemuva kwe-electroplating, eminye imikhiqizo isadinga ukufakwa umbala. Umbala uvame ukuhlukaniswa nge-varnish yokubhaka kanye noqweqwe oluthambile, futhi umkhiqizo oqediwe udinga ukufakwa kuhhavini.
bhaka. Uma iphrintiwe, udinga ukwengeza i-Boli (Epoxy).
8. Ukuhlolwa kwekhwalithi nokupakishwa kwayo, umkhiqizo ngamunye uyahlolwa, abafanelekayo bayopakishwa ezikhwameni, futhi ezingafanelekile zizosetshenzwa kabusha. Eqinisweni, zonke izinyathelo zidinga
Ngemuva kokuhlolwa kwekhwalithi, imikhiqizo ephumayo izoqhubeka ithuthuka.
Isikhathi sokuthumela: Nov-16-2021